सुरु भयो ब्रोकर रहित सेयर कारोबारको बहस : कसरी हुन्छ ब्रोकर रहित सेयर कारोबार ? (हेर्नुहोस्) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५५ Basanta Khanal	0 Comments	ब्रोकर रहित सेयर कारोबार
काठमाडौं : पुँजी बजार प्रविधिमैत्री भएसँगै अब नेपाली लगानीकर्ताले ब्रोकार रहित सेयर कारोबारको माग गर्न थालेका छन् । अनलाइन प्रणालीको विकास, लगानीकर्तामा सचेतना वृद्धि लगायतका कारण पनि यस्तो माग आउन थालेको हो । कतिपयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको समेत उदाहरण दिने गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अहिले नेपालको पुँजी बजारले प्रविधिमा फड्को मारेको भन्दै अबको दिनमा ब्रोकर रहित सेयर कारोबार सेवा सुरु हुनुपर्ने बताए ।उनले भने, ‘अहिलेका ब्रोकर कम्पनीहरुले अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी रुपमा भूमिका निवाह गर्न सकेका छैनन् । ब्रोकर कमिसन पनि उच्च हुँदा लगानीकर्तालाई धेरै भार परेको छ ।’ अहिले लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा कुनै न कुनै ब्रोकरको माध्यमबाटै गर्नुपर्छ । धितोपत्र व्यवसायमा ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा, ग्राहकको नाममा नामसारी गरेर ल्याइदिने, किनबेच गर्ने र कारोबार भएको रकमको सुनिश्चितताको जिम्मेवारीसमेत ब्रोकरहरुकै हुन्छ ।
यसआधारमा लगानीकर्तालाई केही सहज भने भइरहेको छ । तर कतिपय अवस्थामा लगानीकर्ताहरुले ब्रोकरहरुमाथि पनि विभिन्न आरोप र गुनासो गर्ने गरेका छन् । तथापि, ब्रोकर मध्यस्थकर्ता हुँदा कारोबार गर्नेलाई सजिलो भने पक्कै भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको सेयर बजारमा साना लगानीकर्ताले समेत ब्रोकर रहित कारोबार गर्न सक्ने अवधारणा नियामक निकाय भारतीय प्रत्याभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) ले अघि सारेको छ । तथापि, भारतीय बजारमा एक दशकभन्दा अघिदेखि नै संस्थागत लगानीकर्ताले ब्रोकर रहित सेयर कारोबार गर्न पाउँदै आएका छन् । उक्त प्रणालीलाई डाइरेक्ट मार्केट एक्सेस (डीएमए) नामकरण गरिएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताले स्टक एक्सचेन्जबाट सोझै कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गर्न पाउँछन् । यसका लागि संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार प्रवृष्टि ब्रोकरले नगरे पनि ग्राहक पहिचानलगायतको विवरण भने राख्ने गर्छ ।
अहिले नेपालमा पनि अधिकांश लगानीकर्ताले अनलाइनको प्रयोग गर्ने हुँदा ब्रोकर रहित कारोबार सम्भंव रहेको अध्यक्ष रौनियारले बताए । ब्रोकररहित कारोबार भयो भने लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन बापत तिर्नुपर्ने ठूलो रकमको बचत हुने उनले बताए । तथापि, यसका लागि नेप्सेको सिस्टममा.भने अपग्रेड गर्नु पर्नेछ । साथै, नेपालमा यस सम्बन्धी कानुनी प्रावधान पनि छैन ।
यसर्थ, धितोपत्र सम्बन्धी नियम, कानुनमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्रोकर रहित सेयर कारोबारका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन यता, लगानीकर्ता माझ ब्रोकर रहित सेयर कारोबारको चर्चा भइरहँदा नियामक निकायले भने खासै चासो दिएको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार ब्रोकर रहित सेयर कारोबारका लागि बोर्डले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । बरु ब्रोकरको संख्या थप्ने र शाखा विस्तार गर्ने मनसायमा बोर्ड रहेको छ । यता, नेप्सेले पनि ब्रोकर रहित सेयर कारोबारका विषयमा बहस सुरु भए पनि नेपाली लगानीकर्ताले तत्कालै यस्तो सुविधा पाउने सम्भावना कम रहेको जनाएको छ ।
कसरी हुन्छ ब्रोकर रहित सेयर कारोबार ?
अहिले लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्दा कुनै न कुनै ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ । कानुनीरुपमै ब्रोकरमार्फत मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था छ । ब्रोकर रहित सेयर कारोबार कार्यान्वयनमा आयो भने लगानीकर्ताले ब्रोकरलाई मध्यस्तकर्ता राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन ।
लगानीकर्ताले कारोबारका लागि आफूलाई आवश्यक पर्ने लगइन र पासवर्ड सोझै नेप्सेबाट लिन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड र केही पूर्वाधार तयारीमा थोरै लगानी थपे पुग्छ । कारोबारका लागि पनि छुट्टै नियम बनाउनुपर्छ ।
Source: nepali paisa
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज मिति २०७७ चैत २२ गते आइतवारको राशिफल पढौं
गत साता करिब ८३ अंक बढेको नेप्से यस साता के होला? →
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको आइपीओ शुक्रबार कति बजे हुँदैछ बाँडफाँट ?
ज्योति लाइफको शेयर सूचीकरण अन्तिम चरणमा
२८ माघ २०७७, बुधबार १९:२० Basanta Khanal	0